Warbixino | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL Warbixino – Page 2 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home Warbixino Subscribe
GAROOWE(P-TIMES)- Hogaamiyaasha golaha Iskaashiga dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa wada hadalo uga socday afar maalmood, kuna shirsanaa magaalada Garoowe ayay soo gabagabeeyeen, waxayna ka soo saareen warsaxaafadeed ku saabsan waxyaabihii ay ka wada hadleen maalmihii shirkoodu socday. Qodobada ugu waa weyn ee aan lafileynin waxaa kamid ahaa dhismaha Xisbi Siyaasadeed...
FAALLO: ONLF waxay qortay Taariikh cusub oo Halgan hubeysan ah,Admiral guuleystay, Maxaase kuduugan?
JIGJIGA(P-TIMES) – Jabhada Xoreynta gobalka Ogaadeeniya ee loo garan og yahay ONLF ama JWXO waxay halgan ka badan 30 sanno oo Hubeysan sameeyeyna naf, maal iyo deegaan-ba, kula jirtay ciidamada ugu tiradda iyo tayada badnaa ee gobalka Geeska Africa, waxayna dagaalkeeda ka bilowday deegaano kuyaala gudaha Soomaali Galbeed, wax yar markii ay Xukuumaddii Kacaanka Soomaaliya ya Xukuumadii Migiste...
QUBANAHA DOORASHADA: Doorashada Puntland & Wararkii ugu dambeeyey Is haysiga Kuraasta baarlamaanka?
GAROOWE(P-TIMES) – Meel xasaasi ah ayay maraysaa doorashada Madaxtinimada ee Puntland, hardan adag ayay wadaan Siyaasiin, Musharaxiin iyo dadka doonaya in ay xubno ka noqdaan baarlamaanka oo dooranaya Madaxda soo socota ee mandiqada, waxaana ilaa hadda meel adag maraya Hardanka dhinacyada. Madaxtooyada Puntland waxay dadaal badan galinaysaa sidii ay ku soo saari lahayd musharaxiinteeda u taagan kuraasta...
XOG RASMI AH: Cabdiweli Gaas oo booqday Jiidaha hore ee G. Sool, muxuuse la kulmay?
Oct 16th, 2018 · 8 Comments
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa subaxnimadii hore ee Talaadada booqday taliska ciidamada difaaca Puntland ee kusugan duleedka deegaanka Tukaraq oo ay Somaliland qabsatay bilowgii sannadkan, Xukuumadiisuna marar badan sheegtay in ay soo celinayso. Madaxweynaha Puntland oo ay safarkiisan ku wehliyeen wasiiro iyo xildhibaano ka soo jeeda gobalka Sool, ayaa la kulmay...
WARBIXIN: Cabdiweli Gaas & Cali Xaaji oo ku loolamaya G. Mudug iyo Arrimaha xiisaha u yeelaya Dagaal siyaasadeedkan.
Oct 14th, 2018 · 1 Comment
GAALKACYO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay todobaadkan iyo kan soo socda bilowgiisa ay Gaalkacyo tagi doonaan Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Musharax Madaxweyne Cali Xaaji Warsame, oo horey ugu tartamay doorashadii 2014-kii, mar kalena waqtigan u orday xilkan. Xogta soo gaartay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in Madaxweynaha Puntland Cabdiweli...
WARBIXIN+XOG: Puntland & Somaliland oo Dagaal isku diyaarinaya Iyo Cabsi laga muujiyey.
LAASCAANO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in maamulada Puntland & Somaliland oo labaduba ciidamadoodu mudo ku dhaw sannad isku horfadhiyaan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, ay isku diyaarinayaan dagaal cusub oo dhexmara labada dhinac todobaadyada nagu soo aadan, xili ay gudahooda kaga furan yihiin xasarado siyaasadeed oo xoog leh. Xog laga helay mid kamid ah Safaaraddaha daneeya...
AKHRISO: Sacuudi Careebiya markii ugu horeysay ayay si toos ah uga hadleen Dilka Wariye Jamaal, Maxayse dhaheen?
Sacuudi carabiya oo eedda ku saabsan dilka wariye Jamal Kashoggi ee la sheegay in lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku tilmaantay ‘been abuur aan sal iyo baar toona lahayn’. Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudi Carabiya Amiir Cabdulcaziz bin Sacuud Bin Salmaan diidmada waddankiisa ayaa waxay timid 11 maalmood kaddib marki Mr Khashoggi ay aragtidiisa ugu dambeysay isaga oo sii galaya...
AKHRISO: Qaar kamid ah Saaxiibada M/weynaha PL oo Xildhibaano ka raadsanaya G Mudug, Xili Isbitaalo daawo la’aan ka jirto?
Oct 10th, 2018 · 1 Comment
GAALKACYO(P-TIMES)- Madaxtooyada Puntland ayaa dhaqaale badan ku bixinaysa xubno daacad u ah, si ay uga mid noqdaan Xildbibaanada Baarlamaanka Puntland ee la soo xulayo, waxaana in badan oo kamid ah saaxiibada Madaxweyne Gaas loo kala diray gobalada oo dhan, taas oo ka dhigan damaca ku aadan in musharaxnimada Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Mas’uuliyiin ka tirsan Madaxtooyadda ayaa soo gaaray...
WARBIXIN+XOG: Loolanka Xildhibaanada Puntland oo meel adag gaaray, Gaas iyo Camay oo lug kuleh & Lacag gaaraysa Boqolaal Kun oo la adeegsaday.
GAROOWE(P-TIMES)- Loolan adag oo xagga xildhibaanada Puntland ah ayaa ka socda mandiqada, waxaana ilaa hadda loolanka ugu badan uu ka socdaa gobaladda Barri, Nugaal & Mudug oo ay rag iyo gabdho badan ku tartamayaan sidii ay u noqon lahaayeen cidda beelahooda matalaysa doorkan baarlamaanka mandiqadaas. Si weyn ayaa isha loogu hayaa Isbedelada iyo arrimaha Xildhibaan-raadinta ah ee ay wadaan dhinacyo...
WARBIXIN: Ma dhul badan oo dawladda iyo AMISOM ay haysteen ayaa gacanta u galaya Al Shabaab?
Maalmihii la soo dhaafay xoogagga Al-Shabaab ayaa u muuqday iney isku fidinayaan deegaanno hor leh, waxayna iyagoo aan wax dagaal ah galin la wareegeen goobo muhiim ah, ka dib markii ay isaga baxeen ciidamada dowladda. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay guulo ka gaarayay dagaalka ka dhanka ah kooxda al-Shabaab ee ka...
WARBIXIN: Sarkaal katirsanaa ONLF oo qoyskiisa aan arag 22 sanno oo hadda is heleen, Maxaase uu xasuustay?
Sep 30th, 2018 · 16 Comments
WARDHEER(P-TIMES) – Feysal Mursal Warsame oo xubin ka ah ururka ONLF , ehelkiisa ma uusan arkin muddo 22 sannadood ah, wuxuuna ka qaxay magaalada Wardheer ee Dowlad Deegaanka Soomaalida sannadkii 1994-tii halkaas oo uu dagaal ka dhacay oo ay dad badan ka qaxeen Wardheer. Feysal wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ula midoobo ehelkiisa kaddib sannado badan oo ay soo mareen cabsi iyo...
DAAWO: M/weynaha Puntland oo ka jawaabay eedihii wasiirkii hore ee Deegaanka Puntland usoo jeediyey, magacaabayna wasiir cusub.
Sep 23rd, 2018 · 1 Comment
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goor dhaw magacaabay wasiirka wasaaradda deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland, xili uu saaka is casilay wasiirkii wasaaraddaas, ka dib markii uu Madaxtooyada ku eedeeyey in ay faragalin ku sameysay Mashaariicdii horumarineed ee ay wasaaraddu waday. Sidda uu saxaafadda u sheegay hadal hayeen u hadlay madaxtooyada Puntland...
XOG+CADEYMO: PUNTLANDTIMES oo dabagal ku sameysay Mashaariic ay isku haystaan PSAWEN & Wasaaradda Deegaanka, Helayna Macluumaad xasaasi ah?
Sep 23rd, 2018 · 14 Comments
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu dhawaan daabacay warbixin la xariirta is heysiga dhanka sharciga ah oo u dhaxeeyey Wasaaradda Deegaanka iyo Isbedelka Cimilada Puntland iyo Hay’adda Biyaha Puntland ee PSAWEN, kuna saabsanaa arrimaha is heysiga arrimaha mashruuc muhiim u ahaa bulshada Puntland ayna dawladda Jarmalku ka hirgalin lahayd gobalada Nugaal & Mudug. Warsiduhu wuxuu...
XOG: Wasiirkii hore Arrimaha gudaha DFS Cabdikariim Guuleed wuu ka wadani-sanaa Wasiirka maanta Mr,Islow
Sep 22nd, 2018 · 13 Comments
24, May 2014, Wasiirkii hore Amniga ee dawladda Faderaalka Abdikarim Hussein Guled ayaa is casilay oo kamid ahaa saaxiibadii Madaxweynihi xiligaas Hassan Sheikh Mohamud sababtuna waxay ahayd qarax lagu weeraray Xarunta baarlamaanka Faderaalka maalinimadaas, waxayna ahayd markii ugu horeysay ee talaabadaas uu qaaday wasiir Amni oo cadeeyey in uu doorbidayo in shaqadaas qof kale loo dhiibo, bacdamaa...
XOG RASMI AH: Maxaa keenay in M/weynaha & RW Soomaaliya ka baaqsadan ka qeybgalka fadhiga guud ee QM?
Sep 22nd, 2018 · 14 Comments
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha iyo Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa ka baaqsaday ka qeybgalka shirka golaha guud ee Qaramada Midowbay, kaas oo sannad kasta la qabto, waana markii 2aad ee uu ka baaqsado Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo horey iskugu diyaariyey safarkas ka hor intii uusan furmin kalfadhiga golaha shacabka. Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in Madaxweynaha...
WARBIXIN XASAASI AH: Soomaaliya waxay dhexda u taagan tahay Dagaal Xawilaadeed ka yimi wadamada Khaliijka.
Sep 20th, 2018 · 1 Comment
MUQDISHO(P-TIMES)- Asbuucyo kahor ayay ahayd markii gobalka Geeska Africa u dhaqaaqay dhinaca nabadda, waxay ahayd wax aan lafileynin heshiiskii Itoobiya, Eritrea, Somalia iyo Jabuuti, waxayna ahayd talaabo aad ay ugu riyaaqeen caalamka badankiisa, gaar ahaana golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbay. Laakiin Soomaaliya faa’iido badan uma yeelan isbedelada gobalka Geeska Africa, sababtuna waa dagaal...
DEG-DEG+DHAGEYSO:- Madaxweyne Gaas Oo Ku Dhawaaqay Inay D. Badhan La Wareegtay Kaalin Ay Puntland Horey Uga Jirtay Qardho.
BADHAN(P-TIMES)-Madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, oo ku Sugan Degmada Badhan ee Gobalka Sanaag, ayaa ku Dhawaaqay in Degmadas, Ay la Wareegtay Kaalin ay horey ugu jirtay Degmada Qardho ee Gobalka Karkaar. Madaxweyne Gaas, oo Shalay Gelinkii Dambe Khudbad ka Jeedinayay Munaasabad Xariga looga Jarayay Jaamacadda Makhir Ee Badhan, ayaa Sheegay in Badhan ay Hormaro balaaran Sameysay,...
Dabeysha Baarlamaanka: Ma Ra’iisul Wasaaraha ku bixi doono, mise Wasiirkiisa Amniga ayuu ku furan doonnaa ?
Sep 20th, 2018 · 13 Comments
Tan iyo markii uu soo baxay khilaaf ka dhex bilowday dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda Dowlad goboleedyada ee dalka ka jira waxaa abuurmay xasillooni daro siyaasadeed, iyadoo Khilaafkan uu sii xoogeystay kaddib markii shir muddo afar cisho socday ay ku yeesheen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka soo saareen war murtiyeed ay ku hakiyeen wada shaqeyntii dowladda...
AKHRISO: Baarlamaanka Soomaaliya oo markale Eedo kulul u soo jeediyey RW Kheyre, kuna baaqay in loo yeero.
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ayaa maalintii 3aad waxaa ay dood ka yeesheen arrimaha amniga. Xildhibaannada maanta hadlayey waxaa ay ku dheeraadeen xaaladda amniga iyo sida ay tahay dowladd inay wax uga qabato. Xildhibaan Jaabir Maxamed Cabdulle waxaa uu diiday xildhibaannada maalmihii tagay sheegay in ciidamada aan wax mushaar la siin, isaga oo yiri “Xildhibaannadii...
DAAWO+AKHRISO: Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka oo markale maantana cadeeyey fashilka Xukuumada ee Amniga dalka.
MUQDISHO(P-TIMES) – Mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya oo u socdo kalfadhigoodii 4aad, kiisa 3aad ayay maanta uga doodeen markale doodaha la xariria Amniga dalka, oo ay sheegeen in ay tahay in lagula xisaabtamo, waxaana ilaa maanta hadashay xildhibaano kala duwan oo soo jeediyey aragtiyo kala gedisan. Dood adag ayay maanta yesheen mudanayaasha baarlamaanka, waxaana doodu intii...
VIDEO-Madaxweyne Ku-xigeenka iyo Gudoomiyaha Barlamanka Puntland oo Garoowe Yimid Shaaciyeyna Arrin Lama Filaan ah oo Baydhabo.. posted on January 18, 2019
XOG:Maxaa kaga wada hadleen Axmed Karaash & Madaxweyne Farmaajo kulankii qarsoodiga ahaa ee Baydhabo? posted on January 18, 2019
Wasiir Arimaha Dibeda Somalia “Dowladda Imaaraadka ma rabno dagaalkeeda” posted on January 18, 2019
Magacyadda raggii fuliyay weerarkii Nairobi oo la shaaciyay posted on January 18, 2019
Al-Shabaab “Waxaan gacanta ku haynaa maydadka 57 askari oo ka tirsan ciidamada….. posted on January 18, 2019
KiaSmutt on XOG:Maxaa kaga wada hadleen Axmed Karaash & Madaxweyne Farmaajo kulankii qarsoodiga ahaa ee Baydhabo?
adidas ultra boost on WAR DEG DEG AH:Natiijada doorashada Puntland ee madaxweynaha oo hada lagu dhawaaqayo & Musharaxii guulaystay oo ah…..
krzem organiczny do picia on PETER KAGWANJA “Isbaheysiga Cusub Ee Somalia, Itoobiya & Eritrea Waa mid Qoomiyadeed oo..” (Warbixin)
jordan 12 on WARBIXIN: Sarkaal katirsanaa ONLF oo qoyskiisa aan arag 22 sanno oo hadda is heleen, Maxaase uu xasuustay?
cheap mlb jerseys on Natiijada wareegii labaad ee doorashada madaxweyne ku xigeenka Puntland oo lagu dhawaaqay & Loolankii oo gaadhay….